AppLock - Apps & Security Center ကိုပိတ်ပါ။ Android အတွက် APK ဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » AppLock - Apps & Security Center ကိုပိတ်ပါ
AppLock - Apps & Security Center ကိုပိတ်ပါ
App Lock -Fingerprint & PIN & Pattern Lock android အတွက်အသုံးဝင်တဲ့ application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားသူများ၏လက်ဗွေသော့ခတ်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ်သို့မဟုတ်ပုံစံသော့ခတ်ခြင်းတို့ဖြင့်သော့ခတ်နိုင်သည်။ APP Lock သည်သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သင်၏ဖုန်းကိုကာကွယ်ရန်ကူညီပေးသည် 24 / 7! သင်၏ဖုန်းကိုပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစွာလုံခြုံမှုရှိစေရန်ကျူးကျော်သူများအတွက် selfie နှင့် icon အတုများကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်။
အဘယ်ကြောင့် App Lock ကိုရွေးချယ်သနည်း။
App lock သည် finger lock lock နှင့် password lock ကိုအသုံးပြုထားသော app locker ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ privacy ကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်သော့ခတ်နိုင်သောသော့ခတ်အတွေ့အကြုံဖြင့်သင့်အားထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုသင်၏ဖုန်းနှင့်အက်ပ်ကိုပိုမိုလုံခြုံအောင်ထားပါ။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရပဲအခြားသူများကသင်၏ဖုန်းကိုရှုပ်ထွေးမှုများကိုသင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။ App Lock ကဘက်ထရီချွေတာခြင်း၊ ဖုန်းသန့်ရှင်းခြင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပါထောက်ပံ့ပေးသည်။
🔐 App Lock - အကွိမျမြားစှာသော့ခလောက်စတိုင်များ
App lock သည် finger lock lock နှင့် password lock ကိုအသုံးပြုထားသော app locker ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းသည်လုံခြုံသောပြခန်း၊ အဆက်အသွယ်များ၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၊ WhatsApp၊ Instagram၊ Skype စသည့်များစွာသောအက်ပလီကေးရှင်းများကိုလိုချင်သည့်အရာများစွာကိုသော့ခတ်နိုင်သည်။
???? Intruder Selfie - ကျူးကျော်သူများကိုရှာဖွေပါ
ကင်မရာခွင့်ပြုချက်အရ၊ အက်ပလီကေးရှင်းသည်လျို့ဝှက်နံပါတ်ဖြင့်အက်ပ်များကိုသော့ဖွင့်သူတစ် ဦး ၏ဓာတ်ပုံကိုရိုက်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများမှ snoop လုပ်ရန်ကြိုးစားသူတစ် ဦး ၏ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ပါ။
🔒 အိုင်ကွန်အတု - App Lock ကိုဖျောက်ပါ
App lock အစား Compass အိုင်ကွန်ကိုသုံးပါ။ App Lock ကိုမည်သူမျှရှာမတွေ့ပါ။
⏲Battery Saver - ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုတိုးချဲ့ပါ
🧹Phone Cleaner - နေရာလွတ်အခမဲ့ပါ
App Lock ကသင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်အမှိုက်ပုံးများ၊ စောင့်ကြည့်ထားသောဗွီဒီယိုများ၊ ခေတ်မမီတော့သောအော်ဒီယိုများနှင့်အသုံးမကျသောဓါတ်ပုံများကိုဖယ်ရှားလိမ့်မည်။ အက်ပ်သော့ခတ်ခြင်းသည်သင်၏ဖုန်းအာကာသထဲကိုချက်ချင်းလွတ်မြောက်စေသည်။
App Lock သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဘယ်တော့မျှအသုံးမပြုကြောင်းစိတ်ချပါ။
သင့်အားသင်၏ဖုန်းနံပါတ်ကို phonecleanteam@gmail.com သို့ပို့ပေးပါ
15.26 ကို MB
ဖုန်းကိုသန့်ရှင်း Apps ကပ